izakhamuzi Russian kufanele ukhokhe izintela eziningi ezahlukene, sidingidwe ngokwakho okuyinto nzima impela. Ngokuhamba kwesikhathi, wonke umuntu ubhekene umbuzo indlela ukuhlonza izikweletu zentela. Ungenza lokhu ngezindlela eziningana.
Zonke bentela ikheli kufika endaweni kokubhaliswa isaziso intela. Futhi ezakheke lashintsha 2012. Henceforth izinhlobo ezahlukene intela (ezokuthutha, umhlaba, impahla) ziphathwa kudokhumenti efanayo. Okuqukethwe incwadi akukatjhuguluki: ukuba nomusa nokukhokhwa kwentela, ubukhulu kanye ngokwemibandela lokukhokha.
Plus e-mail isaziso ilungele uyithumele irisidi lapho ukukhokha izintela nezimali. Asikho isidingo ukuya intela noma ukuba ufune izindlela zokuziphindiselela ukuphrinta idokhumenti. Nokho, amaphutha amaningi kule ndlela isaziso. Okokuqala, kuba impela alithembekile: uhlamvu nje abakwazi ukufinyelela lapho uya khona. Ngokwesibonelo, angabawa asuswe ibhokisi leposi, futhi kulesi simo ukuze afakazele ukuthi umyalezo itholiwe, cishe akunakwenzeka. Okwesibili, lapho beshintsha isaziso yokuhlala kuzothunyelwa ekhelini ubudala. Okwesithathu, incwadi evela intela ingathunyelwa Wakhumbula futhi umemukeli nje akanawo isikhathi ukukhokha izintela ngesikhathi. Phakathi naleso sikhathi, ukwehluleka imikhondo ezinjalo ukuba enqwabelene isithakazelo. Futhi nakuba umthetho isakhamuzi akaphoqelekile wuliswa uma isaziso awuthunyelwanga ngesikhathi, practice ezinkantolo kaningi thimu intela.
Njengoba obonwa izikweletu zentela nge wavakashela intela
Funda sithembele ukukhokha inani lentela ungabonga uvakashele ehhovisi lentela endaweni lapho uhlala khona. Kuyohlale kudingeka ukuthatha umhloli VAT ukuhlonza wentela. Ukuya kulesi sigigaba, kubalulekile ngaphambili ukucacisa amahora alo okuqala, ngesikhathi sekhefu amakhefu noma uhlelo kabusha. Yenze ungahlala ukubiza kusengaphambili ecacisa indlela yekubona izikweletu yentela intela ethile.
Izinzuzo le ndlela kuyinto ijubane layo uma igijima nokwethembeka: isaziso sinikezwe wentela mathupha. Futhi ungakwazi ngokushesha ukukhokha intela, ngokuba siqiniseke ukuthi ngemva kwesikhathi esithile wayengabhekiseli uyasho isigwebo. Nokho, le nqubo ithatha isikhathi: udinga ukuba emsebenzini ukuya intela noma ukuze ubuyele emuva kokuchitha imali ekuhambeni, kukhona njalo ematfuba ukuwela indawo. Ngaphezu kwalokho, kuyinto kuleli qophelo ukwehluleka uhlelo intela singenzeka noma hang computer. Ukuze lula inqubo umtselo, wasungula uhlelo inthanethi isheke izikweletu.
izikweletu Inthanethi isheke intela
Muva nje, ukufunda izikweletu sakho sentela kungaba ku-portal ye-Federal Tax Service. Inzuzo undoubted zalesi simiso ukuthi izikweletu zentela isheke kungaba imizuzu embalwa nje. Futhi, bafunde ukwaziswa ezithakazelisayo unga kusukela endlini, futhi ngokuqondile kusukela emsebenzini, futhi ngisho ibhasi, uma usebenzisa ifoni ephathekayo exhunywe kwi-Inthanethi. Imininingwane kule sayithi uthembeke ngokuphelele, futhi okubaluleke kakhulu, okusebenza. Uma iphrinta, ungaphrinta irisidi futhi ukukhokha isikweleti ngosuku olufanayo.
Ububi kwalesi simiso esisodwa kuphela - ngempela zidinga khona ikhompyutha ne uxhumano lwe-inthanethi.
Imiyalelo: indlela yokuthola izikweletu zentela ikumodi inthanethi
1. Iya "I-akhawunti yami" wentela.
2. Funda incazelo inkonzo bese uchofoza "Yebo, ngiyavumelana."
3. Esikhathini ifasitela esivula, faka TIN, igama, patronymic nokuvikeleka kogaxekile (izinhlamvu ukusuka isithombe)
4. Chofoza "Ukucinga" bese ulinda uhlelo ukucubungula ulwazi. Uma konke ugcwalise kahle, etafuleni idatha ye izikweletu zamanje izintela nemisebenzi e ambalwa.
5. Ukuze ukhokhele izikweletu ngosizo website, kubalulekile ukuba uqaphele izintela nezimali, ngokuchofoza inkinobho yesinxele segcekeni ngekholomini yokuthoma.
5.1. Ukuze uthole irisidi yokukhokha, kumelwe uchofoza "Cash" ku Wavula ifasitela, engeza ikheli lomkhokhi, wokugubha lokumaka "Engeza leli kheli idokhumenti lokukhokhisa" bese uchofoza "Qalisa".
5.2. Ukuze inkokhelo EFT chofoza "cashless" yavula e imininingwane yasebhange khetha. Izikhungo kuyokudlulisela yokukhokhelana ebhange ku-intanethi obakhethayo, ngayo nefunda ngayo sizokwazi ukukhokha izintela ku-akhawunti yamanje.
Carl von Clausewitz: amaqiniso kusukela biography, usebenza, izingcaphuno
Yangaphakathi Design Cottages